Muraayado fudud oo buluug ah
Ku dhaji muraayadaha indhaha
Dhiirrigelinta muraayadaha indhaha
Muraayadaha ugu fiican Maalinta Koowaad, jaakadaha, kabaha isboortiga iyo heshiisyada kale ee dharka (2020): Mashiinka hore iyo keydka dharka waxaa soo sheegay Retail Egg
Bandhigga Dahabka ah ee '2020' ee ugu horreeya ragga iyo haweenka, dharka iyo kabaha ganacsiga, oo ay ku jiraan jaakadaha sare, kabaha isboortiga, muraayadaha indhaha iyo qiimo dhimis dheeraad ah oo ku saabsan dharka, kabaha iyo qalabka Raadi qaabka ugu wanaagsan ee hore, dharka iyo kabaha heshiisyada ee Amazon Prime Day, oo ay ku jiraan ugu badan ...
Saadaasha sanadka 2025: Warbixin ku saabsan Suuqa Indhaha ee Baaskiil Baaskiil Nooc, Codsi iyo Muuqaal Gobol
Warbixinta "Suuqa Ciyaaraha Isboortiga Caalamiga ah ee Baaskiilka" waxay bixisaa tirakoobyo waaweyn oo ku saabsan xaaladda warshadaha waana ilo qiimo badan oo hagitaan iyo hagitaan u ah shirkadaha iyo shakhsiyaadka xiiseynaya suuqa. Warbixinta cilmi baarista ee ku saabsan suuqa muraayadaha baaskiilka isboortiga waxaa ku jira wadista ...
Muraayadaha Muraayad Noocee ah ayaad Rabtaa inaad Xidhato Mustaqbalka?
Beri baa, waxaan wada dareemaynay in gabdhihii waaweynaa ee muraayadaha indha-sarcaadku xidhnayd ahaayeen dareemayaal, dareemayaan caajis iyo dareen la’aan kaftan ah. Si kastaba ha noqotee, sanadihii la soo dhaafay, shirkado badan oo waaweyn oo waaweyn ayaa taageeray, muraayadaha oo qof walbana uusan necbeysan ayaa si lama filaan ah u noqday waxyaabo moodada ah oo noqday ne ...
Wali miyaad doorataa muraayadaha wareega wareega iyo muraayadaha laba jibbaaran?
Muraayadaha muraayadaha indhaha ayaa noqotay mid ka mid ah waxyaabaha daruuriga u ah wadada. Wali miyaad doorataa muraayadaha wareega wareega iyo muraayadaha laba jibbaaran? Markaad ku safreyso wadada, sheyga ilaalinta indhaha waa muraayadaha indhaha. Dhawaan, moodada looxyada aan caadiga ahayn ayaa si aamusnaan ah loogu afuufay warshadaha qalabka. Tani ...
Aragtida guud, muraayadaha qorraxda waa "qalab xagaaga", laakiin ma ogtahay?
Aragtida guud, muraayadaha indhaha waa "xagaaga lagu daro", laakiin ma ogeyd? Falaadhaha Ultraviolet ee xilliga jiilaalka sidoo kale waxay waxyeello u leeyihiin indhaha. Xitaa maalinta daruuraha, UVA iyo UVB wali indhahaaga ayey gaari doonaan. Xaqiiqdii, indhaheennu waa kuwo jilicsan oo jilicsan xilliga jiilaalka. Dhinac, b ...
Muraayadaha muraayadaha indhaha waxay kaloo leeyihiin “nolol badbaado ah”
Si loo doorto muraayadaha indhaha oo ku habboon, talooyinka aasaasiga ah ee soo socda waa in maanka lagu hayaa: Ka-hortagga UV: Xulo muraayadaha indhaha ee xannibi kara 99% ~ 100% UVA iyo shucaaca UVB. Cabirka muraayadaha indhaha: iibso muraayadaha cabbirka weyn. Muraayadaha muraayadaha oo aad u tiro badan ayaa daboolaya tiro ballaadhan waxayna gacan ka geysanayaan yareynta t ...
Muraayadaha midabada leh
waxaa qoray admin on 19-06-03
Muraayadaha muraayadaha indhaha, oo ah nooc ka mid ah muraayadaha qorraxda-hoos u dhaca, ayaa ka tirsan waxyaabaha jirka ka ilaaliya jirka. Shaqada ugu weyn ee muraayadaha indhaha ayaa ah ka hortagga cuncunka iyo dhaawaca ay u geystaan ​​shucaaca dibadda ee loo yaqaan 'ultraviolet rays' indhaha dadka iyo inay bixiyaan jawi muuqaal oo raaxo leh. Iyadoo aan lahayn qaab sax ah ...
Khibrad Ganacsi oo Caalami ah 12 Sano
Jadwalka Waqtiga gaarsiinta oo sax ah
Tixgeli Adeegga iibka kadib
Qolka A328, Kechuang Pioneer Park, Degmada Quanshan, Xuzhou, Jiangsu, Shiinaha
Muraayadaha ugu fiican Maalinta Koowaad, jaakadaha, isboortiga ...
Saadaasha sanadka 2025: Warbixinta Ciyaaraha B ...
Muraayada Muraayadahee Noocee Ahayd Doontaa Inaan ...
Weli miyaad dooraneysaa wareega dhaqameed ...
Aragtida guud, muraayadaha indhaha waa R ...